musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Divine Painter Raphael Zvino Akadzoserwa kuHupenyu
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Italy inofanirwa kuwana mubairo wekusimba pakatarisana neCOVID-19 denda. Kutsunga kwenyika kukunda dambudziko redenda, kutevedzera mirairo yekurapa, uye kuvimba nesainzi kwabhadhara.
nhasi, Italy, mutungamiri pakati penyika dzeEurope sepasi pasi pezviyero zvitsva zvinodzivirira, inokwanisa kudzokorodza zviitiko zvakaiswa pakumira-ne.
Pakati peizvi pane chiitiko chakatsaurirwa Raphael pachiitiko chemakore mazana mashanu ekufa kwake (500-1520), akafukidzwa gore rapfuura neiyo coronavirus emergency.
Iyo yakanakisa uye inoyevedza yezana ramakore regumi neshanu Palazzo della Cancelleria (nzvimbo yekunze yeHoly See mumoyo weRoma yekare) pakati pemienzaniso yakanakisa yekuvakwa kweRoma Renaissance, ichaita chiitiko chemanheru chakatsaurirwa kuna "Divine Painter" - hunyanzvi. uye hupenyu hwaRaphael,
Munyori wenhoroondo weArt Mirko Baldassarre, zvakare muchengeti weiyo hunyanzvi hwekutungamira, achataura nekuratidzira mamwe ehunyanzvi hwemupendi kubva kuUrbino, achivabatanidza nemareferensi uye nekuita zvekare kwezvimwe zvinonyatsojeka uye zvakakosha zvikamu zvehupenyu hwake hupfupi uye hwakanyanya. .
Rondedzero yaMaestro Baldassarre, yakakamurwa kuita zviito zvitatu, ichaverengerwa nekuitwa kwezvimedu zvemimhanzi naWolfang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydin, Johan Sebastian Bach, uye Antonio Vivaldi. Zvidimbu zvichaitwa neAurora uye Rinaldi tambo quartet yakafumiswa nekufungidzira kwemafirimu matatu (Urbino-Rome-Florence) akagadziridzwa nemugadziri wevhidhiyo Mattia Enrico Rinaldi nemifananidzo yemabasa anotsanangurwa nemunyori wenhoroondo.
Chiitiko chacho, nekutanga kwayo nezuro munaNovember 19, inodzokororwa muna Mbudzi 20, 26 na 27 Mbudzi uye ichaitika muAula Magna yechigaro chenhoroondo cheApostolic Chancellery (pakuvhurwa kwakasarudzika), iyo ichiri kuitisa matare nhasi, uye Holy See: Apostolic Penitentiary, Apostolic Signatura (dicastery yeRoma Curia uye idare repamusoro-soro remutemo weCanon weHoly See) uye Roman Rota.
Chiitiko chisati chatanga, vatori vechikamu vachabvumidzwa kushanyira "kamuri yemazuva makumi maviri" yakakurumbira ine mafrescoes akapendwa naGiorgio Vasari muna 1546 (zvikamu kubva kuPontificate yaPapa Paul III Farnese).